Xagalka ah qaab calculator mugga Ahraamta
Xagalka ah calculator mugga Ahraamta qaab
Xagalka ah qaab calculator mugga Ahraamta kuu ogolaanayaa inaad aad si aad u hesho mugga ah noocyada kala duwan ee Silanyo, sida saddex xagal, qaab iyo wax kasta oo noocyada kale ee Silanyo, by qaaciidooyinka kala duwan.
Nooca Ahraamta ah xisaabinta mugga
By meesha saldhigga Waayo, Ahraamta polygonal joogto ah Waayo, Ahraamta xagalka ah oo joogto ah Waayo, Ahraamta qaab joogto ah Waayo, tetrahedron a
Dhererka: Salka bedka:
Dhererka: Kooxda Base: Number of dhinac saldhig:
Dhererka: Kooxda Base:
Edge ee tetrahedron ah:
Pyramid waa polyhedron a sameeyey by xira saldhig polygonal iyo dhibic, loo yaqaan Cardiff oo. laayeen saldhig kasta iyo qaab Cardiff xagalka ah, loo yaqaan waji lateral. Waa adag conic saldhig polygonal. —
h - Height of Ahraamta ah
S - Aagga saldhiga
Ahraamta oo joogto ah waa Ahraamta joogto ah oo salka waa geesoolayaasha joogto ah.
a - Side saldhig
n - Tirada dhinac ee saldhigga ah
Ahraamta joogtada ah saddex xagal waa Ahraamta la xagal-xagalka Midigtayda salkeeda ilaa extruding inay hal dhibic.
Ahraamta qaab joogto ah waa Ahraamta ah saldhig square oo wajahaya waa saddexagal labaale siman.
Tetrahedron waa polyhedron ka kooban afar weji saddex xagal, lix geesaha si toos ah, iyo afar geesood vertex.
a - Laayeen of tetrahedron a
Raadi mugga ah qaababka joomateri ee kala duwan, sida saaraayo, koorta, dhululubo, gudbikaraa, Ahraamta, by qaaciidooyinka kala duwan.
Raadi wareega ah qaababka joomateri ee kala duwan, sida goobo, square, laydi, xagalka, baaralalogaraam, rhombus, trapezoid by qaaciidooyinka kala duwan.
Isla'eg saablay calculator solver
Xalliyaan kasta oo isla'eg saablay, heli discriminant oo dhan xididdada isla'egta.
Lambarada Binary calculator
Qabashada howlaha xisaabta, isku dhufasho, kala qeybinta, Intaa waxaa dheer, kala goynta, macquul IYO, macquul AMA, modulo 2, tirooyin binary